China Pet Bottle Juice Hot Ukugcwalisa Machine ifektri kanye nabaphakeli | Sawubona
Umshini Wokugcwalisa I-PET Bottle Hot Hot
Umugqa wethu wokugcwalisa ijusi lamabhodlela we-PET uhlanganisa ukuhlanza ibhodlela, ukugcwalisa nokufaka umshini emshinini owodwa we-monoblock. Izinqubo zenziwa ngokuzenzakalela ngokuphelele. Ukugcwalisa ibhodlela le-PET noma ibhodlela lengilazi noma ibhodlela likabhodlela konke kungenziwa ngezifiso.
Qhudelana neJet Bottle Juice Hot Filling Machine 4 ku-1 Monoblock Production Line
Singahlomisa nolayini wokukhiqiza isiphuzo ngemishini yokwelashwa kwamanzi, uhlelo lwangaphambi kokwelapha imishini yokuxuba, kanye nohlelo lokupakisha kufaka phakathi umshini wokufaka imikhono we-sleeve, umshini wokupakisha we-shrink njll njengomugqa owodwa ophelele.
1. Ukuhambisa umoya
2.Juice Ukugcwalisa futhi Ukupakisha System
Umshini wokugcwalisa oshisayo we-RXGF uchungechunge uhlanganisa ukuwashwa kwamabhodlela, ukugcwaliswa kwamanzi nokufakwa ku-monoblock eyodwa, futhi izinqubo ezintathu zenziwa ngokugcwele ngokuzenzakalela. Isetshenziselwa ukugcwaliswa okushisayo kwejusi nesiphuzo setiye. Ifakelwe uhlelo lokulawula ukushisa oluphelele, uhlelo lokuhlehlisa, uhlelo lokuhlanza oluzenzakalelayo nohlelo lokulawula. Into ngayinye yomshini ethintana nalolu ketshezi yenziwe ngensimbi ephezulu engenasici nenjoloba ebangeni lokudla.
● Onke amakhanda e-rinser wensimbi engagqwali, isitayela sokujova isitayela samanzi, okuningi konga ukusetshenziswa kwamanzi nokuhlanzeka okuningi.
● I-Stainless steel Gripper enepulasitiki, qinisekisa ukuphahlazeka okuncane kwebhodlela ngesikhathi sokuwasha
● amaphampu okugeza insimbi engagqwali
● Umbhobho wokugcwalisa ngokunemba okuphezulu, ukulawulwa kwesiginali okuguquguqukayo kwe-PLC, kuqinisekisa ukunemba okuphezulu kokugcwaliswa
● Ukugcwaliswa kwamandla adonsela phansi, nokugcwalisa ngokushelela nangokuzinza
● Zonke izingxenye zokuxhumana zensimbi engagqwali & ithangi eliketshezi, ipholishi enhle, okulula ukuyihlanza
● Akukho bhodlela elingagcwaliswa
● Isistimu yokubeka nokubeka, amakhanda we-electromagnetic capping, anomsebenzi wokukhipha umthwalo, qiniseka ukuthi ukuphahlazeka okuncane kwebhodlela ngesikhathi sokufaka
● Konke ukwakhiwa kwensimbi engagqwali okungu-304
● Akukho bhodlela elingenakubekwa kanye nokuma okuzenzakalelayo lapho kushoda ibhodlela
Amandla / 500ml
I-RXGF 8- 8-3
Langaphambilini Umshini wokugcwalisa isiphuzo samandla
Olandelayo: Umshini Wokugcwalisa Umbhodlela Wengilazi